Funda indlela yokudlala iPing-Pong
Izibonda eziphambili zePing-Pong
Ukuze udlale umdlalo omhle we-ping-pong, kufuneka uqonde izibetho ezisisiseko kuqala. Ngaphandle kwesiseko esiqinileyo kwisiseko se-tennis itafula, uya kuba nzima ukusebenzisa iindlela eziphambili zabadlali abaphezulu ngokuphumelelayo. Funda indlela yokudlala i-ping-pong ngendlela efanelekileyo ngala macebiso kwiindawo ezihlukeneyo.
Qaphela: Izikhundla kunye nezibetho eziboniswe apha zizinto ezimbalwa ezininzi oza kufuneka uzenze ukudlala umdlalo omkhulu we-ping-pong.
Iziqalo ezisisiseko: Isinyathelo ngeNyathelo
Nazi ezinye ze-ping-pong ezisisiseko ezibuza ukuba unokuphucula umdlalo wakho.
I-Forehand Counterhit-I-Side View : Ngenye inyawo ngaphambili, eli liyisiseko "esilungele".
I-Backhand Counterhit-Side View : Khangela indawo ye-backhand apha.
I-Backhand Push-Side View : Le ngxabano iyisiseko sawo onke ama-backhand backspin
I-Forehand Push - I-Side View: Yona isiseko sazo zonke iziphambano zangaphambili zangaphambili ezenza ukuba kube lula ukufunda izibetho eziphambili ezinjenge-chop forehand, ebalulekileyo kwimidlalo yokuzikhusela.
Ukukhonza ibhola ngeendlela ezahlukeneyo usebenzisa esinye sezi zikhundla:
I-Backspin Backpin Ekhonzayo : Le yindlela enye yokwenza ibhola.
I-Forehand Topspin Ekhonza : Nantsi enye indawo yokukhonza.
I-Forehand Pendulum Backspin / Sidespin Serve - I-Front View : Le nto iyaziwa ngokuba yi-pendulum ngoba ukuhamba kwebhet kufana nokuthi ubunzima be-pendulum buhamba njani.
I-Forehand Reverse Pendulum Sidespin Serve - I-Side View : Efana nale ntshukumo ekhankanywe ngasentla, le ntshukumo isuka kude nomzimba ngokungafani nenkonzo yendabuko ye-pendulum.
I-Backhand ayikho i-Spin Serve : Le nkonzo inokwenziwa kwikona yakho ye-backhand kodwa usebenzise le nto ukukhonza phakathi kwetafile.
I-Forehand Tomahawk Topspin / Sidespin Serve-I-View View : Ukunyakaza kwalokhu kunceda kufana nendlela amaNdiya aseMelika aboniswa ngayo ukuhambisa ama-tomahawks kumabhayisikobho. Inokuthi yenziwe naphi na ekupheleni. Ukuxhamla ibhola kuya kubakho ukwenza ukuba ukubuyiselwa kombukeli kuhambe kumgca wecala lomncedisi.
Cofa kula maqhagamshelwano ukuze ufunde kabanzi malunga nemivimbo ehlukeneyo yeerally.
I-Forever Loop Ebhekiselele kwi-Puss - Side View : Esi sikhundla sikuvumela ukuba ushaye ibhola malunga neesentimitha ezintandathu phezu kwe- net ngokukhawuleza ukukhawulezisa nokukhawuleza ukukhupha ibhola ngaphantsi kwetafile.
I-Block Block ejongene neLoop okanye iDrayivu - I-Front View : Ukuchasa ukukhanya okuphakathi kwe-backspin, ufuna ukushaya ibhola phezu kwenetha ngokukhawuleza ukuya kwijubane eliphakathi kwaye ungeze i-backspin yokulawula ibhola engcono.
I-Forehand Smash ejongene neLob : Le fudula isetyenziswe ukubetha ibhola ekhuni kakhulu kwindawo yokudlala ngomgudu wokugcina umdlali wakho etafuleni. Uza kufuna ukubeka ibhola kude nomdlali wakho ukwenzela ukuba angakwazi ukuyifinyelela, okanye udlale ibhola ngqo kumdlali wakho ukuze angakwazi ukuphuma kwindlela ngexesha - ukuba afune ukudlala kancinci .
Emva kokuba ufunde izibetho ezisisiseko, khangela ukuba ungayisebenzisa njani kunye nokudlala i-tennis yakho yeyona tennis .
Yintoni iBunker kwiKlasi yeGalofu?
Ukulawula Xa I-Golf Ball Collides Ngenye
Biarritz Green kwiGalofu
Indlela yokuPhatha i-Gymnastics Rip
I-Great Dinosaur Movie Tag Lines
Ukukhuthaza iiKota zabaTyhini
Umbane kunye neNitro RC IiNqwelo: Uthelekiso olusecaleni
Izikolo ezimbini ze-Geographic Thought
Iingxenye ezibalulekileyo zeChina
5 iiWebhsayithi zokuFunda iMatriki eziPhakamileyo
Ukubuyela kwiSikolo soKhuseleko kwiSikolo sootitshala beeMfuno eziZodwa
IJografi yeSiphepho uSandy
Indlela Ukubonelela NgeMali kunye Nokufunwa KweMali Ukuchonga Iimali Zenzalo Zomdla
UThixo unguBawo wethu waseZulwini ongunaphakade
Funda izifinyezo zeSpeyin Ufanele Uzazi